परिचित दुईपाङ्ग्रे सवारी यामाहा | गृहपृष्ठ
Home यातायात परिचित दुईपाङ्ग्रे सवारी यामाहा
on: August 09, 2012 यातायात
दुईपाङ्ग्रे सवारीमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल यामाहा ब्राण्डले नेपालमा करीब डेढ दशकको व्यावसायिक यात्रा तय गरिसकेको छ । यामाहाको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेजले नेपाली ‘बाइक राइडर’हरूको चाहनाअनुरूप विभिन्न मोडल र सेग्मेण्टका मोटरसाइकल विक्री गर्दै आएको छ । ४६ वर्षअघि स्थापना भएको एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेजले नेपालमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन लाखौंको सङ्ख्यामा विक्री गरी आफूलाई बेष्ट मोटरसाइकल सेलरका रूपमा अघि सार्न सफल भएको दाबी गरेको छ ।
एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेजले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १ लाख ५ हजार थान र मोटरसाइकल र स्कूटी विक्री गरेको थियो । तीमध्ये मोटरसाइकल मात्रै ८४ हजार विक्री भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यो आव २०६७/६८ को तुलनामा ५ हजार थान कम हो । कम्पनीले सो आवमा स्कूटीसहित १ लाख १० हजार थान मोटरसाइकल विक्री गरेको थियो । तीमध्ये मोटरसाइकल मात्रै ९० हजार विक्री भएका थिए । बैङ्कहरूले अटोलोनमा कडाइ गरेका कारण हरेक वर्ष विक्री घट्दै गएको कम्पनीका बिजनेश हेड सुरज मानन्धरको भनाइ छ । उनका अनुसार इण्डष्ट्रिजतर्फ बजार केही कम भए पनि बजार शेयरहिस्सा भने बढाउन सफल भएको छ ।
पछिल्लो समय यामाहाको वाईजेडएफ आर फिप्टिन नेपाली ‘बाइक राइडर’हरूमाझ अति लोकप्रिय बन्न सफल भएको कम्पनीले बताएको छ । ‘प्रिमियम बाइकमध्ये वाईजेडएफ आर फिप्टिन हटकेकका रूपमा स्थापित भएको छ,’ मानन्धरले भने । आव २०६७/६८ मा कुल सवारीसाधनमध्ये यामाहा मोटरसाइकलको बजारहिस्सा १९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०६८/६९ मा २ प्रतिशतले बढेर २१ प्रतिशत पुगेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली बजारमा स्पोर्ट्स बाइकका दुई मोडलसहित अन्य १५ मोडलका यामाहा मोटरसाइकल उपलब्ध छन् । एफजेड सिक्सटिन, एफजेड–एस (न्यू ग्राफिक्स), वाईजेडएफ आर फिप्टिन, एफजेडएक्स, फेजर, इण्टाइसर, वाईबीआर १ सय २५ र १ सय १० सीसी, एसएस १ सय २५ सीसी, एलवाईएम ११० (ड्रम ब्रेक) र एलवाईएम १ सय १० (डिस्क ब्रेक) एसजेडआर न्यू, एसजेड एक्स र स्पोर्टसमा वाईजेडएफ, आर सिक्स ६ सय सीसी र एक्सजेसिक्स ६ सय सीसी नेपाली बजारमा उपलब्ध यामाहाका दुईपाङ्ग्रे सवारी हुन् । यामाहालाई उपभोक्तामाझ विश्वसनीय ब्राण्डका रूपमा परिचित गराउने लक्ष्यका साथ स्थापित एमएडब्ल्यू इण्टरप्राइजेजले सोहीअनुसार विश्वस्तरीय उत्पादन र सेवा दिँदै आएको बताएको छ ।
कम्पनीले उच्चतम पर्फमेन्स, प्रोएक्टिभ डिजाइन र इन्नोभेटिभ टेक्नोलोजीद्वारा उपभोक्तासँग दीर्घकालीन सम्बन्ध विकास गर्ने नीति लिएको बताएको छ । साथै, यसले उपभोक्ताको जीवनस्तर वृद्धिमा पनि सहयोग गर्ने मानन्धरको दाबी छ । अबका दिनमा पनि ग्राहकको रुचिअनुसारका सवारीसाधन उपलब्ध गराउँदै जाने विषयमा कम्पनी सधैं क्रियाशील रहने उनको भनाइ छ । कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको क्षमता वृद्धिमा समेत विशेष ध्यान दिँदै आएको बताएको छ । कर्मचारीको समग्र विकासमा कम्पनी व्यवस्थापन लागिपरेको अर्का मार्केटिङ हेड विक्रम शर्मा पौडेल बताउँछन् । यसका साथै वातावरणीय मुद्दा, नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । हाल कम्पनीका देशभर थ्री इन वन (डिलर, शोरूम, सर्भिस सेण्टर सेवा)सहित ४७ डिलर रहेका छन् । ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर देशका प्रमुख शहरलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा कम्पनीले ४१ ओटा छुट्टै सर्भिस सेण्टर स्थापना गरेको छ ।
यामाहाका विभिन्न सेग्मेण्ट
नेपालको बजारअनुसार कम्पनीले उपलब्ध गराएका मोटरसाइकललाई पाँच सेग्मेण्टमा विभाजन गरेको छ ।
प्रिमियम सेग्मेण्टअन्तर्गत एफजेड सिक्सटिन, एफजेड–एस (न्यू ग्राफिक्स), आर फिप्टिन, एफजेडएक्स र फेजर रहेका छन् । यिनीहरूको मूल्य क्रमशः रू. १ लाख ९९ हजार ९ सय, रू. २ लाख १६ हजार ९ सय, रू. ३ लाख २२ हजार ९ सय, रू. १ लाख ७४ हजार ९ सय र रू. २ लाख २१ हजार ९ सय रहेको छ । नेपालमा हटकेक भनी कम्पनीले दाबी गरेको मोटरसाइकल वाईजेडएफआर फिप्टिन नीलो, कालो र रातो रङमा उपलब्ध छ ।
इकोनोमी डिलक्स सेग्मेण्ट
इकोनोमी डिलक्स सेग्मेण्टअन्तर्गत वाईबीआर १ सय १० सीसीको मोटरसाइकल रहेको छ । कम्पनीले यो सेग्मेण्टको मोटरसाइकलमा कुनै पनि समस्या नरहेको दाबी गरेको छ । लामो यात्राका लागि समेत अति उपयोगी यो मोटरसाइकल अधिकांश ग्राहकको रोजाइमा पर्ने गरेको कम्पनीले बताएको छ । यसको मूल्य रू. १ लाख ४२ हजार ९ सय रहेको छ । त्यस्तै, यो सेग्मेण्टअन्तर्गत एलवाईएम १ सय १० (ड्रम ब्रेक) र एलवाईएम १ सय १० (डिस्क ब्रेक) पनि उपलब्ध छन् । यी मोटरसाइकलको मूल्य क्रमशः रू. १ लाख ४५ हजार ९ सय र रू. १ लाख ५३ हजार ९ सय रहेको छ ।
वाईबीआर १ सय २५ सीसीको मोटरसाइकललाई कम्पनीले इकोनोमी सेग्मेण्टअन्तर्गत राखेको छ । यसको बजारमूल्य रू. १ लाख ६० हजार ९ सय रहेको छ । यसलाई कम्पनीले लामो यात्राका लागि अति उपयोगी मोटरसाइकलका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
पावर एण्ड स्टाइल सेग्मेण्ट
इण्टाइसर र एसएस १ सय २५ सीसीका मोटरसाइकललाई कम्पनीले पावर एण्ड स्टाइल सेग्मेण्टअन्तर्गत राखेको छ । यो मोटरसाइकलमा अहिलेसम्म कुनै पनि समस्या र गुनासो नआएको कम्पनीको दाबी छ ।